Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Xukuumadda Ku Canaantay Ka Aammuska Dadka Reer Somaliland Ee Yemen Lagu Xasuuqay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Xukuumadda Ku Canaantay Ka Aammuska Dadka Reer Somaliland...
Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Xukuumadda Ku Canaantay Ka Aammuska Dadka Reer Somaliland Ee Yemen Lagu Xasuuqay
“Aad iyo aad baan uga xunnahay masuuliyad-darrada Xukuumaddu muujisay ee Ubaxeedii lagu laynayo Badaha ee aanay marnaba ka hadlaynin ee…” Xoghayaha guud ee Waddani
Xoghayaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani Maxamed Cabdillaahi Uurcadde, ayaa xukuumadda ku dhaliilay inay ka aamustay dadkii lagu xasuuqay badda Yemen oo ay ku jireen dad dhalasho ahaan ka soo jeeday Somaliland. Islamarkaana wuxuu sheegay in dhibaataasi tahay foorihii ugu horreeyay Saldhiga Millateri.
Xoghayuhu sidoo kale wuxuu sheegay in xubinnimadii iyo xilkii ay xisbiga ka hayeen ka qaadeen afar xubnood oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga. Xoghayaha oo ugu horrayn ka hadlay dhibaataddii ka dhalatay dooni dad dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland lagu xasuuqay badan Yemen.
“Waxa dhacday maalin dhawayd doon dad badan oo reer Somaliland ahi saarnaayeen oo ubixi dalka ah in gantaal lagu dhuftay. Dadkaanna ilaa hadda xukuumadu kamay hadlin, manayna tacsiyadayn, waxa dacwad ahna caalamka umay gudbin sida ay warbaahinta iyo ummada reer Somaliland ka makhraatiga yihiin. Aad iyo aad baan uga xunnahay masuuliyad-darrada Xukuumaddu muujisay ee Ubaxeedii lagu laynayo Badaha aanay marnaba ka hadlayn, wax tixgalin ahna aan siinayn.” ayuu yidhi Maxamed Cabdillaahi Uurcadde.
Xoghayaha Waddani waxa uu intaas ku sii daray; “Waxaan ugu baaqayna xukuumadda inay arrinta si degdeg ah uga hadasho oo caalamka ay u gudbiso, iyadda oo ay tahay foorihii ugu horeeyay ee Saldhiga Millateri iyo dhibtii saldhiga Millateri ee xisbiga Waddani ka qaylinayay ayuu midhihiisi ka yahay.”
Sidoo kale, Xoghayaha guud ee Wadddani waxuu sheegay in xubinnimadii iyo xilkii ay xisbiga ka hayeen ka qaadeen afar xubnood oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga, waxaanu yidhi; “Xisbigu wuxuu go’aamiyay markii uu eegay anshax marintii iyo hawlihii xisbiga, markii uu eegay.”
Wuxuu xilalkii ka qaaday xubnahan hoos ku qoran oo afartuba ka mid ahayeen golaha dhexe ee xisbiga iyo xubnimadii xisbiga.
1-Gudoomiye ku-xigeenkii Gobolka M/jeex ee Xisbiga Waddani Cabdirisaaq Iid Maxamed.
2-Gudoomiyaha degmada A/dhagax ee Xisbiga Waddani Cali Cabdi Muuse. 3-Maxamed Gaaxnuug Cilmi. 4-Khadar Maxamed Xuseen. Maanta (shalay) laga bilaabo wax xil ah ama xubnimo ah oo ay xisbiga u hayaan ma jirto habayaraate.